XOG:-PSF oo laka furfuray iyo qorshii Saciid Deni oo hirgalaya. | Warbaahinta Ayaamaha
XOG:-PSF oo laka furfuray iyo qorshii Saciid Deni oo hirgalaya.
PSF ayaa la sheegay in lakala furfuray kadib markii lagu bixiyey lacag farabadan
MUQDISHO-AYAAMAHA-Isimada dhaqanka Magaalada Boosaaso ee Xsrunta Gobolka Bari ayaa bilaabay dadaalo xal loogu raadinayo xiisadda ka dhalatay xilka qaadistii Madaxweynaha Puntland uu ku sameeyay Agaasimihii Ciidamada Hay’dda PSF Maxamuud Cismaan Diyaano ee ka taagan Magaaladaasi Boosaaso.
Odayaasha dhaqanka iyo Isimada dhex-dhexaadinta wada ayaa shirar kala duwan Boosaaso kula qaatay mas’uuliyiinta ka tirsan Xukuimadda Puntland, sida, Wasiiro, Saraakiil Ciidan & Maamulka Gobolka Bari, iyaga oo kala hadlay sidii xaaladda loo dejin lahaa, isla markaana xal looga gaari lahaa muranka ka dhashayy xilka qaadista Agaasimihii Hay’adda PSF-ta Puntland.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi kudarayaan in saacadaha soo socda Isimada ay la kulmi doonaan Saraakiisha Ciidamada PSF ee ku sugan Magaalada Boosaaso si ay uga codsadaan in lala qaato dhex-dhexaadinta ay bilaabeen si loo xalliyo muranka taagan.
Dhankale ciidamadan sida gaarka ah u tababaran ee PSF ayaa la sheegay in lakala furfuray kadib markii lagu bixiyey lacag farabadan, ayagoo loo maray hab qabiil. arrintaa ayaa waxaa ka howlgalay wasiirka Maaliyada Puntland iyo wasiiro kale, iyadoo durba qaar kamid ah ciidanka ay u soo goosteen dhanka Saciid Deni, Madaxweynaha Puntland.
Sidookale Villa Somalia oo arrintaan ku lug leh ayaa la sheegay in dhankooda ay ku bixyeen lacag, ayagoo raba in Puntland ay ka kiciyaan khalalaaso iyo dagaal, taas oo yareyn karta hamiga Saciid Deni oo ah inuu gacanta ku dhigo xildhibaanada 16ka kursi ee lagu dooran doono Magaalada Boosaaso.
Xaaladda Magaalada Boosaaso ayaa hadda ah mid degan, iyada oo Magaalada ay ku wada sugan yihiin Ciidamada PSF-ta oo aad u hubeysan iyo Ciidamada Daraawiishta dowlad Gobeedka Puntland.